The Rohingya News Bank : Bhashan Char Island
Showing posts with label Bhashan Char Island. Show all posts
Labels: 2020, Bhashan Char Island, en, News, Relocation, Rohingya
Labels: 2020, Bhashan Char Island, Cox's Bazar, en, News, Reparation, resettlement, Rohingya
Labels: 2020, Bhashan Char Island, en, News, Relocation, Rohingya Crisis, Video
Labels: 2020, Bhashan Char Island, en, News, Rohingya Leaders, Trip
Bhashan Char ကျွန်းရောက် ရိုဟင်ဂျာများနေထိုင်ရေး ခက်ခဲ
Labels: 2020, Bhashan Char Island, mm, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, နေထိုင်ရေးအခက်အခဲ
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ပြောင်းရွှေ့ပို့ဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက စီစဉ်ထားတဲ့ Bhashan Char ကျွန်း ဆီကို ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေ သွားရောက်လေ့လာကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မဆုမွန် စုစည်း တင်ပြ ထားပါတယ်။
Labels: 2020, Bhashan Char Island, mm, ရို]င်ဂျာခေါင်းတောင်, သတင်း, သွားရောက်
ဘာဆန်ချာကျွန်းဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုထားဖို့ လုံခြုံတဲ့နေ ရာ လို့ ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရ်ှပြော
■ အမ်ဖန် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ် ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်မှာ ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့် ဘာဆန်ချာကျွန်းဟာ မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ခံနိုင်တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ထားဖို့ အလုံခြုံဆုံးနေ ရာတခု ဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလား‌ဒေ့ရှ် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်‌ရေးဝန်ကြီးက ပြောလိုက်ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် ကော့ဆက်ဘဇားခရိုင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘာဆန်ချာကျွန်း‌ပေါ် ပြောင်းရွှေ့ နေရာချထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Labels: 2020, Bhashan Char Island, mm, ရိုဟင်ဂျာ, လုံခြုံတဲ့နေရာ, သတင်း
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ Amphan ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်နေတာကြောင့် ရေကြီးရေ လျှံနိုင်တဲ့ကျွန်းပေါ်က ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ရာပေါင်းများစွာကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက ဘေးလွတ် ရာရွှေ့ ပြောင်းပေးထားပါတယ်။
Labels: 2020, Amphan, Bhashan Char Island, mm, မုန်တိုင်းကြောင့်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, ပြောင်းရွှေ့
Labels: 2020, Bangladesh, Bhashan Char Island, en, News, Rohingya Refugee, UN, Urges
Labels: 2020, Bangladesh, Bhashan Char Island, en, News, Opposes, Rohingya, UNHCR
By Rebecca Wright and Salman Saeed,
(CNN)Dozens of Rohingya refugees stranded at sea for weeks are being quarantined for coronavirus onaremote island in the Bay of Bengal after docking in Bangladesh on Saturday.
Labels: 2020, Bhashan Char Island, CNN, en, News, quarantined
Labels: 2020, Bangladesh, Bhashan Char Island, Boat People, en, News, quarantined, Rohingya
Rohingyas land in Bhasan Char
Bangladesh finally could send few Rohingyas to Bhasan Char.
The government developed the river island at the estuary of Meghna River for human habitation with all the facilities, but due to international pressure could not relocate Rohingyas from Cox’s Bazar to Bhasan Char.
Inanew move, the government sent few Rohingyas who entered Bangladesh in the last couple of days by using small boats to Bhasan Char.
Labels: 2020, Bangladesh, Bhashan Char Island, en, News, Rohingya